January 2020 - Ukali Orali
श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (२३अध्याय) सुन्नुहोस स्वस्थानी माताले सबैको रक्षा गरुन्!!
श्री स्वस्थानी व्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने कठीन व्रतको पर्व हो । यो पर्व पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमा सम्म एक महिना चल्दछ । यो व्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ । सत्य युगमा भगवान विष्णुको सल्लाह अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउन श्री स्वस्थानी व्रत बसेको र चिताएको पुरा भएको विश्वासमा श्री स्वस्थानी… Read More »
सरकारी कार्यालयमा रक्सीले मस्त कर्मचारी, पि.एन क्याम्पसको लफडा के हो ? (भिडियो सहित)
सरकारी कार्यालयमै मदिरामा लिप्त हुने कर्मचारी भेटिएका छन । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १९ को कार्यालयमा कार्यरत बिमल गिरी नाम गरेका राष्ट्रसेवक रक्सीको तालमा दिनहु जसो कार्यालय आउने गर्दछन । सरकारी पोषाक लगाएर, कार्यालय परीसर भित्रै मदिराको तालमा गिरीले देखाउने चर्तिकला सहीतको रिपोटीङ गण्डकी टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम गण्डकी छड्केले गरेको छ । यो एक दुई… Read More »
युट्युबबाट ‘भाग्य’ चम्काएका भाग्य लाई लाग्यो यस्तो झड्का –
काठमाडौं – युट्युबमा अन्तर्वार्ता लिएर चर्चामा आउने सेलिब्रेटी कमै छन् । पछिल्लो समय भाग्य न्यौपानेको भाग्य भने युट्युबले नै चम्काइदिएको छ । गाउँगाउँ पुगेर लिएका उनका अन्तर्वार्तालाई लाखौँ दर्शकले युट्युबमा हेर्ने गरेका छन् । समस्यामा परेका तर हाइलाइटमा नपरेका समाचारलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने भाग्यले युट्यबकै लागि भनेर रातदिन समय दिइरहेका छन् । केही वर्षयता… Read More »
बलिउडका चर्चित नायक गोविन्दा नेपालका ज्वाईँ हुन् । नेपाली मूलकि सुनिता अहुजासँग गोविन्दको विवाह भएको थियो । नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजनामा आउँदा गोविन्दलाई आयोजकले नेपालका ज्वाईँ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछन् । ९० को दशक गोविन्द बलिउडका चर्चित कलाकार थिए । कुल्लि नं १, राजा बाबु, आन्दोलन, पाटर्नर जस्तो सुपरहिट फिल्म खेलेका गोविन्द बलिउडमा जति चम्केपनि… Read More »
शारिरीक सम्पर्क विषय विवाहित र अविवाहित सबैका लागि लागू हुन्छ । विवाहित व्यक्ति पनि सधैं शारिरीक सम्पर्क गर्न सक्षम हुनसक्छन् भन्ने हुँदैन । तर, तपाईंले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ कि लामो समयसम्म शारिरीक सम्पर्क नराख्दा शरीरमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ भनेर ? यदि तपाईंले लामो समयसम्म शारिरीक सम्पर्क राख्नुभएको छैन भने तपाईंको शरीरमा धेरै खाले परिवर्तन… Read More »
२६ करोडमा दीपिका पादुकोण !!
बलिउड अभिनेत्री विद्या वालनले केही समयअघि महिलाप्रधान चलचित्रले २ सयदेखि ५ सय करोडसम्म कारोबार गर्ने दिन आउने समय धेरै नभएको बताएकी थिइन् । बलिउडमा महिलाप्रधान चलचित्रको संख्या उल्लेख्य बढिरहँदा विद्याको यो भनाइ आएको हो । बलिउडमा हाल प्रदर्शनरत अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको चलचित्र ‘छपाक’का अलावा ‘पंगा’, ‘शकुन्तला देवी’ र ‘सायना’सहित ७ चर्चित महिला केन्द्रित चलचित्र रिलिज हुँदैछन् । बलिउडमा… Read More »
जब कोरोनाको उपचारमा जाने डाक्टरलाई आफन्तले बिदाइ गर्दा आँसु थाम्न सकेनन्
बेइजिङ — कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिरहँदा चीनमात्रै होइन पूरा विश्वलाई यसको सन्त्रासले आतंकित पारेको छ । बिहीबार विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘विश्वव्यापी स्वास्थ्य संक टकाल’ घोषणा गरेको छ । वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पूरै चीनभर र विश्वका २० भन्दा बढी देशमा देखिएको छ । शुक्रबार बिहानसम्म चीनमा कोरोना भाइरसका कारण वुहानको खुला सडकमा एकजना व्यक्तिको… Read More »
सजिलो छैन कोरोनाभाइरलको उपचार गर्न, मर्मस्पर्शी तस्बिरहरु
काठमाडौं ।नोवेल कोरोनाभाइरले विश्वभर आतंक मच्चाएको छ । विशेषगरी चीनमा यो भाइरसले महामारीको रुपमा लिएको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार कोरोनाभाइरले चीनमा एक सय ७० जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने करिब सात हजार संक्रमित भएका छन् । शंकाकोभरमा हजारौं संख्या मानिसहरु अस्पताल पुग्ने गरेपछि चीनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले भ्याइनभ्याइ छ । उनीहरुले आराम गर्न त परैजाओस्… Read More »
हामी सधै जीवन जिउने कुरा गर्छौं । जिउने कला सिक्छौं । यसरी जिउने, त्यसरी जिउने भन्दा भन्दै सबै समय गुज्रिएर जान्छ । जीवन कसरी जिउने ? यसको कुनै फर्मूला छैन । किनभने फरक बर्ग, बर्ण, भूगोल, संस्कृति, हावापानीले पनि मानिसको जिउने शैलीमा प्रभाव पार्छ । एउटा भूगोलमा जन्मिएका मानिसले जुन ढंगले जिउने अभ्यास गर्छ, अर्को… Read More »
भगवानले छोरी उसलाई दिन्छ जसले छोरी पाल्न सक्ने हिम्मत राख्छ (एक चोटी अबस्य पढ्नुहोला)
छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ? भगवानले उसैलाइ दिन्छन, जसले छोरी पाल्ने हिम्मत राख्छ त्यसैले भनिन्छ छोरा भाग्यले हुन्छ छोरी सौभाग्यले हुन्छिन , सय वटा भाग्य पछि एउटी छोरीले जन्म लिन्छिन छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ? तर हाम्रो समाज छोरीलाई अझैपनी हेला अनि तिरस्कार गर्ने गरिन्छ । पुरातनवादी सोच अनि पुरुष प्रधान देश भएकाले… Read More »